Kuroorana uye kurambana (1-5)
Kukoshesa upenyu hwemunhu (6-9)
Kubata varombo zvakanaka (10-18)
Mutemo wekusapedzeredza pakukohwa (19-22)
24 “Kana murume akaroora mukadzi asi otadza kufadzwa naye nekuti anenge aona chimwe chinhu chisina kunaka paari, anofanira kunyora gwaro rekumuramba omupa,+ omudzinga mumba make.+ 2 Kana mukadzi wacho abva pamba pemurume wacho, anogona hake kuva mudzimai wemumwe murume.+ 3 Kana murume wechipiri akamuvenga,* uye akanyora gwaro rekumuramba, omupa, omudzinga mumba make, kana kuti kana murume wechipiri uya akamuroora akafa, 4 murume wake wekutanga akamudzinga haazobvumirwi kumuwanazve kuti ave mudzimai wake, pashure pekunge mukadzi wacho asvibiswa, nekuti izvozvo zvinosemesa Jehovha. Haufaniri kuunza chivi munyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka. 5 “Kana murume achangoroora, haafaniri kushanda muchiuto kana kupiwa mamwe mabasa api zvawo. Ngaasapiwa mabasa kwegore rimwe chete uye ngaagare pamba achifadza mudzimai wake.+ 6 “Hapana anofanira kutora guyo kana huyo yaro achibatira munhu waakapa chikwereti,+ nekuti ikoko kubatira munhu chinhu chinomuraramisa. 7 “Kana munhu akazivikanwa kuti akaba hama yake yechiIsraeri, uye kuti akaibata zvakaipa, akaitengesa,+ munhu wacho akaba anofanira kuurayiwa.+ Unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.+ 8 “Kana denda remaperembudzi* rikapararira, unyatsoita zvese zvaunoudzwa kuti uite nevapristi vedzinza raRevhi.+ Unofanira kunyatsoita zvandakavarayira. 9 Yeuka zvakaitwa Miriyemu naJehovha Mwari wako pamaiva munzira muchibva kuIjipiti.+ 10 “Kana ukapa muvakidzani wako chikwereti,+ haufaniri kupinda mumba make kuti utore chaanenge ati achakupa kuti ufanobata. 11 Unofanira kumira panze, uye murume wawapa chikwereti anofanira kukuunzira uri panze chinhu chacho chaari kuda kuti ufanobata. 12 Uye kana ari munhu anoshayiwa, haufaniri kunorara uine chaanenge ati ufanobata.+ 13 Unotofanira kumudzorera chaunenge wamubatira panongovira zuva, aende kunorara aine nguo yake,+ uye achakukomborera; uye uchanzi wakarurama pamberi paJehovha Mwari wako. 14 “Usabiridzira munhu wemaricho anoshayiwa uye murombo, angava mumwe wehama dzako kana kuti mutorwa ari munyika yako, mumaguta* ako.+ 15 Unofanira kumubhadhara musi iwoyo,+ zuva risati ravira, nekuti iye anoshayiwa uye upenyu hwake hwakabatwa nemari yaanotambira. Ukasadaro, achakuchemera kuna Jehovha, uye uchanzi une chivi.+ 16 “Vanababa havafaniri kuurayirwa mhosva yevana, uye vana havafaniri kuurayirwa mhosva yavanababa.+ Munhu anofanira kufira chivi chake chete.+ 17 “Usatonga mhosva yemutorwa kana yenherera+ uchitsaudzira, uye usabatira chirikadzi chipfeko chayo kana waikweretesa.+ 18 Yeuka kuti iwe wakava muranda muIjipiti, uye Jehovha Mwari wako akakudzikinura imomo.+ Ndokusaka ndiri kukurayira kuti uite izvi. 19 “Kana ukakohwa mumunda mako, wokanganwa chisote mumunda, usadzokera kunochitora. Chinofanira kusiyirwa mutorwa, nherera, nechirikadzi,+ kuti Jehovha Mwari wako akukomborere pazvese zvaunoita.+ 20 “Kana ukazunza muorivhi wako, usarambe uchingozunza mapazi acho. Zvinenge zvasara zvinofanira kuva zvemutorwa, nherera, nechirikadzi.+ 21 “Kana wakohwa mazambiringa mumunda wako wemizambiringa, usadzokera kunounganidza anenge asarira. Anofanira kusiyirwa mutorwa, nherera, nechirikadzi. 22 Yeuka kuti iwe wakava muranda munyika yeIjipiti. Ndokusaka ndiri kukurayira kuti uite izvi.
^ Kana kuti “akamuramba.”
^ Shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti maperembudzi rinoreva zvakawanda uye rinogona kusanganisira zvirwere zvakasiyana-siyana zvinotapukira paganda. Rinogonawo kusanganisira humwewo utachiona hungaenda pazvipfeko nepadzimba.